मालिका केशरीले ल्याए उपन्यास कृति “टुङाल” – Pahilo Page
६ भाद्र २०७८, आईतवार २३:०० 635 पटक हेरिएको
पोखरा । साहित्यकार मालिका केशरीको बौद्ध दर्शनमा आधारित आख्यान “दुङाल”को राजधानीमा विमोचन गरिएको छ । उपन्यासलाई इतिहासकार एवं हिमाली अध्ययनका ज्ञाता डा. रमेश ढुंगेल, मानवअधिकारवादी सुदीप पाठक, पूर्वसचिव एवं साहित्यकार डा. सुधा शर्मा र आख्यानकार मालिका केशरीले संयुक्तरुपमा विमोचन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी पाठकले उपन्यासले शरणार्थीको मानवअधिकार, न्याय र आत्मसम्मानका कुरा उठाएकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपन्यास पढ्दा पाठकलाई हरेक घटनामा आफू पनि सँगै रहेको भान हुन्छ । आप्रवासन या शरणार्थी हुनु रहर नभएर बाध्यता भएको कुरा उपन्यासले राम्ररी स्थापित गरेको छ । मानवअधिकारका दृष्टिले दुङाल पाठकलाई रोचक र घोचक कोसेली हो ।” यसले तिब्बती समुदायको समस्यामात्र नउठाएर उनीहरुको न्याय र आत्मसम्मानको वातावरण बनाउनका लागि कर्तव्यबोध गराएको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. शर्माले पुरुष लेखक भएर पनि महिलाका भावनाको गहिराई छोएर शरणार्थीको कथा भन्नसक्नु उपन्यासको सफलता भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शरणार्थी केटी कार्चुङको कथा उनकै आँखाबाट भनिएको छ । लेखक संवेदनशील हुने हो भने महिला पात्रले न्याय पाउने रहेछन् । अरु लेखक पनि मालिका केशरीजस्तो हुने हो भने मानवअधिकारमा पनि सुधार हुने रहेछ । यो उपन्यास समाजको यथार्थलाई चित्रण गर्न सफल छ । यो मननीय, संग्रहणीय र पठनीय छ ।” तिब्बती शरणार्थीको परिवेशको उपन्यास भए पनि यसले विश्वभरि नै विस्थापन र शरणार्थीको पीडा भोगेका मानिसको पक्षमा बोलेको उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै इतिहासकार डा. ढुंगेलले ‘दुङाल’ले लगभग हराउन थालेको र बिर्सन लागेको शरणार्थी समस्यालाई साहित्यमार्फत उजागर गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्लो समय शरणार्थी समस्या बिर्सन लागिसकेका थियौं । उनीहरुका दुःख, पीर, वेदना र उकुसमुकुसलाई दुङालले अभिव्यक्त गरेको छ । आँखैले देखेजस्तो छ हरेक घटना । एक बसाइमा पढिसकिन्छ । अन्तिम अध्यायमा नपुगेसम्म पाठकलाई तानिरहन्छ ।” उपन्यासले दुई भिन्न संस्कृतिबीचको अन्तरद्वन्द्व देखाउँदै आधुनिकता र परम्पराको समन्वयको खाँचो औंल्याएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आख्यानकार मालिका केशरीले आफ्नो बाल्यकालदेखिको शरणार्थी शिविरसँगको सामीप्यताका कारण “दुङाल” जन्मेको बताउनुभयो । “देशमा बस्न नसकेपछि जीवन खोज्दै यहाँ आइपुगेका शरणार्थीप्रति हामीले गरेको व्यवहार सही छन् त ? भन्ने प्रश्नले घच्घचाएपछि उपन्यास नलेखी बस्न सकिनँ”, उपन्यासकार केशरीले भन्नुभयो ।
साहित्यकार मालिका केशरीका यसअघि बौद्ध दर्शनमा आधारित उपन्यास “पुनरुत्थान” र “सुवर्णलता” प्रकाशित छन् । सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको “दुङाल” उनको तेस्रो उपन्यास हो ।